डा. रौनियार ! तपाईको जीत भएकै छैन, अन्तरिम आदेशको किन अपव्याख्या ?::mirmireonline.com
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र जहाँ जान्छन्, ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्दै नारा लगाउनु स्वभाविक हो । ज्ञानेन्द्रको देशाटनमा जसरी नारा नलागेपनि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. राजकुमार रौनियार हिजो बुधबार फर्कदा भने त्यस्तै झल्को देखियो । प्रतिष्ठानको ४२ औं सिनेटले बर्खास्त भएका उपकुलपति डा. रौनियार सिनेटको सर्वोच्चताको विरुद्ध अदालत गए । सर्वोच्च अदालतले डा. रौनियारको एकपक्षिय कुरा सुनेर सिनेटको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु तथा उपकुलपतिलाई कारवाही गर्नुको कारण सहित छलफलका लागि १५ दिन भित्र उपस्थित हुनु भनेर अन्तरिम आदेश दियो । यो कुरा चैत्र ४ गतेको हो । तर, यहि निर्देशनलाई ‘सरकारको हार, आफ्नो जीत’ सम्झेर आत्मरतीमा रमाउँदै ६ गते प्रतिष्ठान जाँदा उपकुलपतिले विराटनगर एयरपोर्ट देखि नै शक्ति प्रर्दशन गरे जुन अत्यन्त लज्जास्पद र हास्यास्पद देखियो । गोयवल्स शैलीमा डा. रौनियारले गरेको योजनाबद्ध प्रर्दशनले वीपी प्रतिष्ठानमा पद र कुर्सीका लागि के सम्म हुँदो रहेछ स्पष्ट भएको छ ।
सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश सँगै चैत्र १२ गते छलफलका लागि बोलाउने निर्णयको पत्रको फोटोकपी बुझेर ६ गते धरान पुग्नु अघि नै आफ्ना समर्थकलाई उनले विराटनगर आउन भने । अदालतको अन्तरिम आदेशलाई आफ्नै जीत भएको भन्दै गोयवल्स शैलीमा अपब्याख्या गरी प्रतिष्ठान भित्रकै आफ्ना विरोधी कर्मचारी र चिकित्सकलाई मानसिक रुपमा तर्साउने रणनीति अपनाएका उनले भारतीय ‘साउथ फिल्म’मा भिलेनको इन्ट्री जस्तो दर्जनौ गाडीको स्र्कटिङ गरी प्रतिष्ठान गए । अनी प्रतिष्ठानमा नारा लाग्यो ‘यो जित कस्को ? रौनियारको ।’ ‘डा. रौनियार आउ, प्रतिष्ठान बचाउ’ आफ्नै कर्मचारीबाट त्रसित भएका उनले अविरजात्रा गरी कडा सुरक्षा घेरामा कार्यालय प्रवेश गरे । कर्मचारी तथा विभागिय प्रमुखलाई अदालतले आफुलाई न्याय दिएको बताउँदै आफु पुनः उपकुलपति भएको, सिनेटको निर्णय अबैधानिक भएको भने । साथमा विभागिय प्रमुखलाई आदेशात्मक निर्देशन दिँदै आफु नै कार्यकारिणी समेत रहेको जिकिर गरे ।
यहाँनिर अदालतले कुलपतिले गरेको निर्णय र त्यसपछि सहकुलपतिले गरेको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नु मात्र भनेको छ । तर, यसैलाई अन्तिम फैसला ठानेर डा. रौनियारले जुन हर्कत देखाए । अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अन्तिम फैसला बनाए गलत यहिँ भएको छ । डा. रौनियारले सर्वोच्चमा आफुलाई सफाइको मौका समेत नदिइ बर्खास्त गरेको जिकिर गरेका छन् । यहाँ उनले न्यायालयलाई समेत दिग्भ्रमित गर्ने काम गरेका छन् । प्रतिष्ठानका सहकुलपतिको निर्देशनमा उपकुलपतिले सिनेटको मिति तय गर्ने प्रचलन छ । तर, सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले दुइ दुइ पटक सिनेट राख्न निर्देशन दिँदा उनले किन अटेर गरे ?
दुइ–दुइ पटक सिनेट बोलाउँदा भाग्ने अनी न्यायालयलाई नै गुमराहमा पार्दै ‘मलाई सफाइको मौका नै दिइएन’ भनेर भ्रम छर्ने छुट डा. रौनियारलाई छ ? उनले पटकपटक मलाई फसाइयो भनिरहेका छन् । उनलाई कसले कसरी फसायो किन सार्वजनिक गर्दैनन् ? रेडियोलोजीको गोल्ड मेडलिष्ट, सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट पुरस्कृत ब्यक्तिलाई कसले सड्यन्त्रमा पार्न खोज्यो ? यदी उनी साँच्चिकै दुधले नुहाएका उपकुलपति थिए भने, उनका विरुद्ध गोयवल्स शैलीमा लाग्नेहरुलाई किन सार्वजनिक गर्दैनन् ?
प्रतिष्ठानले मेडिकल माफिया विशाल पण्डितसँग मिलेर एमआरआई उपकरण खरिद गर्ने प्रयत्न गर्यो । उनी सहि थिए भने, त्यो उपकरण खरिद गर्न किन सकेनन् ? एमसिएच भवनमा विवाद थियो, विवाद हुँदै गर्दा त्यसका ठेकेदारसँग मिलेर कमिसनको लोभमा किन भुक्तानी दिए ? अंकोलोजी कार्डियोलोजीको रकम किन रकमान्तरण गरे ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु छन्, जसको जवाफ डा. रौनियारले सिनेटमा दिनुपर्दथ्यो । सिनेटमा आफुले गरेका काला कर्तुतको जवाफ दिन सकिँदैन भनेर सिनेट नै बहिस्कार गर्ने ? प्रतिष्ठानमा रामराज्य चलाएका थिए भने, कर्मचारीलाई विषेशज्ञता भन्दा बाहिर किन आन्तरिक सरुवा गरे ? कर्मचारीले गलत गरे स्पष्टिकरण लिने र कारवाही गर्ने प्रक्रिया हुँदाहुँदै किन आमचकारी गाली गर्दै हातपात गर्न लगाए ? प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय सिनेट (कार्यकारिणी) हो । त्यहि कार्यकारिणीका सर्वसम्मत सदस्यले पारित गरेको निर्णय अबैधानिक, गैरकानुनी हो भनिन्छ भने, सिनेटको सर्वोच्चता के हो ? सिनेटको काम कारवाही के हो ? डा. रौनियारले प्रष्ट्याउनु पर्छ ।
उपकुलपतिमा अलिकति पनी नैतिकता र शिष्टता थियो भने, अदालतको पूर्ण निर्णय नआउञ्जेल चुपचाप रहनुपर्दथ्यो । १२ गते पछिको फैसला अनुसार चल्नुपर्दथ्यो । तर, शक्ति र सत्ताको उन्मादमा रमाउने उपकुलपतिले एक साता कुर्न सकेनन् । सिनेटका २१ जना सदस्यहरुले उपकुलपतिले गरेका जस्तो सुकै निर्णयमा आँखा चिम्लिएर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो भने, त्यहाँ ती सिनेटरको आवश्यक्ता छैन । प्रतिष्ठान उपकुलपति एक्लैले चलाए भयो । उपकुलपतिले ‘उठ् भने उठ् बस भने बस’ गर्नुपर्ने सिनेटको नियम हो भने त्यसमा डा. रौनियार माथि ठूलो अन्याय पक्कै भएको छ । ज–जसले उपकुलपतिले गलत गरे भनेर हस्ताक्षर गरे, विद्रोह गरे, ति सिनेटरलाई कारवाही हुनुपर्दछ । र, त्यो कारवाही उपकुलपतिले गर्ने आँट गर्नुपर्छ । नेतृत्वको विरुद्ध लाग्ने सिनेटरलाई पनि सिनेटमा बस्ने अधिकार छैन सामुहिक राजीनामा दिनुपर्छ ।
लोकतन्त्रको सुन्दरपक्ष भनेको वाक स्वतन्त्रता हो । तर, वीपी प्रतिष्ठानका हकमा उपकुलपतिको अगाडी ‘ज्यू ज्यू’ गर्न मात्र पाइन्छ । उनका विरुद्ध कसैले कानेखुसी मात्रै गर्यो भने त्यो उनको लागि सबै भन्दा ठूलो शत्रु बन्दछ । जवसम्म यो परिपाटीको अन्त्य हुँदैन वीपी प्रतिष्ठानको ब्यवस्थापन सुध्रिदैन ।
न्यायपालिका र कार्यपालिका राज्यका दुई महत्वपूर्ण अंग हुन् । यि दुइ एक अर्काका परिपूरक पनि । देशमा शुशासन कायम गर्न न्यायपालिकाको जति महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, न्यायपालिकाको निर्णय पालन गर्न कार्यपालिकाको भूमिका पनि उत्तिकै रहन्छ । वीपी प्रतिष्ठानको हकमा पनि अब न्यायालयले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमान्दार भएर फैसला गर्न आवश्यक छ । न्यायालयको अन्तरिम आदेशलाई नै अन्तिम फैसला भएको भन्दै गोयवल्स शैलीमा प्रचार गर्दै जनता र न्यायालयलाई नै दिग्भ्रमित गराउने कार्यलाई बन्द गर्नुपर्दछ ।